वन विकासको बाधक होइन, समृद्धिको आधार हो : मन्त्री बस्नेत « Naya Page
प्रकाशित मिति : December 28, 2019
काठमाडौं, १२ पुस : वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पूर्वाधार विकासमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय बाधक नभई समृद्धिको साधक भएको दावी गरेका छन् । राससका लागि रमेश लम्साल, अशोक घिमिरे र हेमन्त केसीसँग वातौमा उनले वन पैदावार समृद्धिका लागि सदुपयोग गर्नेगरी नीति बनाइएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा परिणाम प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । मन्त्री बस्नेतसँग गरिएको अन्तवार्ताको सम्पादित अंशः
सेवा प्रवाहको दृष्टिले अन्य मन्त्रालयले सम्पादन गर्नुपर्ने अन्य जिम्मेवारीको कोणबाट समीक्षा गर्छौं । मलाई लाग्छ वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कति काम गर्‍यो भनेर अन्य सेवाग्राही, सरोकारवालासँग लिने प्रतिक्रिया अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । मन्त्रालयका तर्फबाट गरिएका समीक्षाका आधारमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको इतिहासमा जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रबाट हेर्दा हामीले महत्वपूर्ण ‘सिफ्ट’ गरेका छौँ । चाहे नीतिगत र कानूनी व्यवस्था, संरचनागत, योजना निर्माण र कार्यान्वयन र सुशासनको दृष्टिले महत्वपूर्ण सुधार गरेका छौँ ।
सङ्घीय सरकारले नीतिगत, रणनीतिक महत्वका योजना, समग्र विकास रणनीति निर्माण गर्ने, त्यसको नीतिगत तथा कानूनी, संरचनागत व्यवस्थाका निम्ति निर्देशित गर्ने, यसका अन्तर्राष्ट्रिय आयामलाई व्यवस्थित गर्ने सङ्घीय सरकारको जिम्मेवारीको क्षेत्रबाट समीक्षा गर्नुपर्‍यो । स्थानीय तहले सम्पादन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा भयो कि भएन भनेर सङ्घीय मन्त्रालयमा खोज्न थालियो भने सङ्घीय प्रणाली नबुझेको हुन्छ । स्वाभाविक ढङ्गले हामी एउटा लामो समयदेखि निश्चित प्रणाली र पद्धतिमा अभ्यस्त हुँदै आएका छौँ, यी विषय हामीले बुझ्ने बुझाउने प्रणाली र पद्धतिमा आधारित छन् । अहिलेका कतिपय टिप्पणीलाई यस अर्थमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
पहिलो विषय ‘हरियो वन, नेपालको धन’ जनताको धन भएको खासै अनुभूति भएको छैन । लामो समयसम्म धेरै मात्रामा काठ आयात गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो । जुन निकै दुःखद् अवस्था हो । हाम्रा केही मान्यतामा भएको कमी, नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाका कारणले त्यस प्रकारको परिस्थिति सिर्जना भएको थियो । कार्यान्वयनमा देखिनुपर्ने तदारुकता र इमान्दारिताको प्रश्नमा पनि यसलाई खोज्नुपर्ने अवस्था थियो । एकातिर हामी हरियो वन नेपालको धन भन्ने, अर्कातिर हाम्रा नीति कानून, मूल्यमान्यता वन भनेको जैविक विविधता र वातावरणीय दृष्टिले सेवा क्षेत्र हो भन्ने मान्यताव्यावहारिक स्थापित थियो । अनि कसरी हरियो वन नेपालको धन बन्छ ? हामीले वनलाई कहिल्यै पनि आर्थिक क्षेत्र मानेनौँ ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण वन मन्त्रालयको प्राथमिकताको क्षेत्र हो । मानव–वन्यजन्तुबीचको सम्बन्धलाई सहअस्तित्वमा आधारित बनाउन र द्वन्द्व कम गर्ने विषयमा हामी काम गरिरहेका छौँ । यसका तीनवटा उपाय छन् । एउटा मान्छे सचेत प्राणी हो त्यसकारण वन्यजन्तुसँग कस्तो व्यवहार गर्ने र कस्तो सम्बन्ध स्थापित गर्ने भन्नेबारेमा सचेततापूर्वक चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा जानकारी दिनुपर्नेछ । दोस्रो हामी वन्यजन्तुको संरक्षणको कुरा धेरै गर्छौं तर कुनै संरक्षण क्षेत्रभित्र कति सङ्ख्याका वन्यजन्तु रहन सक्छन् वा त्यसको भारवहन क्षमता कति छ त्यसको विश्लेषण गर्ने हो ।
मताभन्दा बढी भएमा ती जीवजन्तु त बाहिर निस्कने नै भो । संरक्षण क्षेत्रको क्षमता सही ढङ्गले विश्लेषण गर्ने र त्यस क्षमताभित्रका वन्यजन्तुलाई त्यही राख्ने र बाँकीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हो कि वा अन्य कुनै विधिद्वारा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो ? तेस्रो कदम यति गर्दागर्दै पनि फेरि द्वन्द्व सम्पूर्ण रुपमा निवारण हुन्छ त ? भन्दा केही न केही बाँकी हुन्छन् । वन्यजन्तुले आएर भौतिक, आर्थिक तथा मानवीय क्षति पुर्‍याएको अवस्थामा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने काम सँगसँगै गर्नुपर्ने हुन्छ ।यी तीन क्षेत्रबाट मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका निम्ति सघाउन पुर्‍याउँछ ।
हामी यही ढङ्गबाट काम गरिरहेका छौँ । मानव गाउँबाट जङ्गलको नजिक नजिक सर्दै गइरहेका छन् । वन क्षेत्र पनि बढ्दैन । वन छेउमा भएका घरहरुलाई एकीकृत व्यवस्थापनतर्फ लैजाने हो कि वा वनको क्षमताभन्दा बढी भएको वन्यजन्तुको व्यवस्थापन गर्ने उपायको खोजी भइरहेको छ ।
यो आंशिकरुपमा सत्य हो । चितवनबाट बर्दियामा स्थानान्तरण गरिएको गैँडा हुर्कनै नसक्ने भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु गलत हो । त्यसको सम्भावना नै छैन भन्ने होइन, सङ्क्रमणको विशेष परिस्थितिमा सुरक्षा व्यवस्था अलि कमजोर हुँदा समस्या आएको हुनसक्छ, त्यसबेलामा पुर्‍याउनुपर्ने ध्यान नपुगेको हुनसक्छ । तर यो आजको कुरा होइन, धेरै अघिको हो । जतिबेला नेपाल चर्को सङ्क्रमणको ढङ्गबाट गुज्रिरहेको थियो । त्यतिबेला राज्यका तर्फबाट पुर्‍याउनुपर्ने सुरक्षा व्यवस्थालगायत सम्बन्धित निकायबाट पुर्‍याउनुपर्ने सुरक्षात्मक उपाय नपुगको अवस्था थियो ।
यो मुलरुपमा गौरव गर्नुपर्ने विषय हो । दुर्लभ वन्यजन्तुका रुपमा एकसिङ्गे गैँडा, पाटेबाघ नेपालका सम्पदा हुन् । एकसिङ्गे गैँडा र बाघ हेर्न थुप्रै पर्यटन नेपाल आउने गरेका छन् । नेपाली हुनुको नाताले विश्वको दुर्लभ वन्यजन्तुमध्येको एकसिङ्गे गैँडा र पाटे बाघ नेपालमा छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भन्न पाउँदा गौरवको महसुस हुन्छ । तर यतिभन्दा भन्दै पनि हामीले दुईवटा कुरामा मुख्य उपलब्धि हासिल गरेका छौँ ।
पहिलो सन् २०२२ सम्ममा बाघको सङ्ख्या दोब्बर बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको नजिक हामी पुगेका छौँ । दोब्बर बनाउने हाम्रो उद्देश्य पूरा हुँदैछ । जुन निकै ठूलो उपलब्धि हो । दोस्रो गैँडाको चोरीशिकारीलाई शून्यमा कायम राख्न सफल भएका छौँ । एक वर्ष होइन, लगातार केही वर्ष शून्य चोरीशिकारीको परिणाम हासिल गरेका छौँ । यसलाई पनि सगर्व हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा राखेका छौँ । यो भनेको जैविक विविधिताको संरक्षणप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धता र वन्यजन्तु संरक्षणको कुशलता हो ।
हाम्रा नीति कानूनका कारण विकासलाई प्रभावित बनाएका कुरालाई हामीले स्वीकार गरेको छौँ । हामीले विकास विरोधी कानूनलाई सुधार गरेका छौँ । सुधार के भनेर गर्‍यौँ भने, पहिलो विकास आयोजना निर्माण गर्नुपर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ९इआए० र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । कहीँ सानो एउटा पानी ट्याङ्की निर्माण पर्‍यो भने कि इआए कि आइई गर्नुपथ्र्यो । अत्यन्त साना आयोजना निर्माणलाई सहज बनाउन ‘संक्षिप्त वातावरणीय मूल्याङ्कन’ गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । वन ऐन तथा वातावरण संरक्षण ऐनमा त्यो व्यवस्था गरेका छौँ ।
त्यस्तै विकासका निम्ति सधैँ सिंहदरबार आइराख्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्दै हामीले स्थानीय आयोजनाको आइइई स्थानीय तहले नै गर्ने, प्रादेशिक आयोजनाका आइइई र इआइए प्रदेश सरकारले नै गर्ने र सङ्घीय आयोजनाको हकमा मात्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । त्यसमध्येका पनि अत्यन्त साना आयोजनाका संक्षिप्त वातावरणीय मूल्याङ्कन गरे पुग्ने व्यवस्था गरेको छौँ ।
यसले विकासको गतिलाई तीव्रता दिन मद्दत गर्नेछ । अब ‘थ्रेस होल्ड’को व्यवस्था पनि गर्दैछौँ । यसले विकास र वातावरणको सन्तुलन मिलाउन सहयोग गर्नेछ । एउटा अव्यवस्थित र अराजक ढङ्गले योजनाविहीनका कामलाई हामी निरुत्साहित गर्छौं, त्यसलाई योजनामा ल्याउछौँ । तर योजनबद्ध ढङ्गले जाँदा लामो समयसम्म भिडिरहनुपर्ने परिस्थितलाई हामी अन्त्य गर्छौं । यो दुई कुराले विकास र वातावरणबीचको सन्तुलन कायम गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । यो हामी भनिरहेका छैनौँ, गरिरहेको छौँ ।
दोस्रो कुरा प्रतिवेदन साभार भएर आउने समस्या छन् । गुणस्तरीयतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कतैबाट साभार भएर गुणस्तरहीन प्रतिवेदन आयो भने त्यसलाई वास्तविक बनाउन अलिकति समय लिनुपर्ने अवस्था आइहाल्छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि हामीले मन्त्रालयमा प्रतिवेदन तयार भएर आयो भने ४५ दिनभित्र स्वीकृति दिन्छौँ । त्यसमा पनि ३० दिनको सार्वजनिक सूचना नै दिनुपर्ने भएका कारणले ४५ दिन कुर्नु परेको हो ।
हामी नियमावलीमा ३० दिने सार्वजनिक सूचनालाई घटाउन सकिन्छ कि भनेर सोचिरहेका छौँ । सूचना प्रविधिको ठूलो विकास भएको छ, सार्वजनिक टिप्पणीका निम्ति ३० दिनको समय आवश्यक छ कि छैन, बरु यसलाई अझ केही घटाउन सकिन्छ कि भनेर काम गरिरहेका छौँ । यति भयो भने वन मन्त्रालयबाट ४५ दिन लाग्ने अवस्थालाई अझ घटाउन बल गरिराखेका छौँ । अब भन्नुस् त वन तथा वातावरण मन्त्रालय विकासका लागि बाधक हो ? होइन, हामी यसलाई अझ सहजीकरण गर्न खोजिरहेका छौँ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रथामिकताका आयोजनामा ‘जमिनका लागि जमिन’ उपलब्ध गराउने अथवा कुनै आयोजनाले वन क्षेत्र उपयोग गर्नुपर्‍यो भने त्यत्तिकै सङ्ख्यामा त्यत्तिकै सङ्ख्यामा निजी जमिन किनेर वन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेपछिमात्र वन क्षेत्र प्रयोग गर्न उपयोग गर्ने व्यवस्था थियो । यस व्यवस्थाका कारणले नेपालमा निजी जमिनको व्यवस्थापनका विषय निकै जटिल छ । यो सबैलाई अवगत नै छ । यसले गर्दा त्यही इलाकामा जमिन किनेर वनलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो भने वन क्षेत्रै किन लिन जानुपर्छ र लगानीकर्तालाई ।
त्यो भए त निजी जमिन किनेर उद्योग बनाउनेतर्फ लागिहाल्छन् । यसलाई सहजीकरण र व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, केही महत्वपूर्ण अन्य आयोजनाका निम्ति हामीले ‘जमिनका लागि जमिन’को सट्टा ‘जमिनका लागि रकम’को व्यवस्था गरेका छौँ । त्यो रकम कहाँ खर्च गर्ने भन्ने पनि हामीले उपयुक्त र प्रस्ट व्यवस्था गरेका छौँ । त्यसका लागि वन ऐनमै वन विकास कोषको व्यवस्था गरेका छौँ ।
त्यही कोषमा पैसा जम्मा हुन्छ र त्यो पैसा वन विकासबाहेक अन्यन्त्र खर्च गर्न पाइन्न । वृक्षरोपण, वन संरक्षण र विकासमै खर्च हुन्छ । यसले विकास र वातावरणबीचको सन्तुलन कायम गर्न सघाउ पु¥याउँछ । यो काम तत्काल गर्दैछौँ । यसका अतिरिक्त हामीले यस वर्षलाई पाँच करोड वृक्षरोपण वर्ष भनेका छौँ । पाँच करोड बिरुवा रोप्दै छौँ । यसको ठोस् कार्यायोजना बनाइसकेका छौँ । वृक्षरोपणसम्बन्धी बुझाइ त्यति राम्रो छैन नेपालमा । तर यस वर्ष हामीले कहाँ कुन बिरुवा रोप्यौँ, त्यसको अवस्था के छ ? प्रस्ट हुने गरी सार्वजनिक गर्छौं । वृक्षरोपणसम्बन्धी मान्छेका बुझाइ हामी बदल्छौँ ।
प्रश्न काठ काट्ने कुरामात्र गरेका छैनौँ, ढलापढा रूखको व्यवस्थापनको कुरा गरेका छौँ । अब उमेर सकिन थालेका रूखलाई राखेर त भएन नि । नयाँ रूख रोप्नुपर्‍यो । बुढो रूखको व्यवस्थापन पनि गर्नुप¥यो । रूख त्यसै कुहिन दिन भएन, अनावश्यक लगानी भइरहेको हुन्छ । एउटा निश्चित अवस्थासम्म रूखको राम्रोसँग संरक्षण गरौँ । निश्चित आयुपछि त्यसको व्यवस्थापनका बारेमा पनि सोच्नुपर्छ ।
यसमा चिन्तित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सामाजिक सङ्गठन (युनेस्को)को सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत क्षेत्रमा पर्यटकको चाप राम्रो छ । त्यस्तै अन्नपूर्ण आधार शिविर र लाङटाङ क्षेत्रमा पनि पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दो छ । मैले भनेको पूर्वाधार विकासका कुरा यी क्षेत्रसँग सम्बन्धित छैनन् ।
रारा, खप्तड, मकालु, कञ्चनजङ्गा, शुक्लाफाँटामा पर्यटक जानु पर्दैन, आज किन त्यहाँ पर्यटक पुग्न सकेका छैनन् । किन चितवन, सगरमाथा, अन्नपूर्ण र लाङटाङमा मात्र पर्यटक गइरहेका छन् । यसको जवाफ के त त्यहाँ न्यूनतम् पूर्वाधार छैनन् । बाँकी ठाउँमा न्यूनतम् पूर्वाधार छन् । हो अब न्यूनतम् पूर्वाधार ती ठाउँमा बनाएरपछि नयाँ गन्तव्य खुल्छन् नि त । पर्यटन प्रवद्र्धनमा यसले सघाउन पुर्‍याउँदैन, यो कुनै बेठीक कुरा भयो ? यसले संरक्षणमा कुनै चुनौती थप्छ ? चितवन, सगरमाथामा न्यूनतम पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउँदै गर्दा ठीक त्यही कुरा रारा, खप्तड, मकालुलगायतमा गर्दा बेठीक हुन्छ ?
यस वर्षको अन्त्यसम्ममा प्रदूषण नियन्त्रणका क्षेत्रमा अनुभूत हुने खालका परिणामा हासिल गर्न सक्नेछौँ । जलवायु पविर्तनको क्षेत्रमा नेपालले निकै थोरैमात्र हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्छ । यो प्रतिशतको हिसाबले हेर्दा ०।०२७ हुन आउँछ । तर हरित ग्यास उत्सर्जनसँगै उत्पन्न परिस्थितिबाट नेपालले ठूलो असर भोग्दै आएको छ । हिउँ पग्लिनु, बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि, अनावृष्टिलगायत असरबाट प्रभावित हुने मुलुकको अघिल्लो सूचीमा नेपाल रहेको छ । हरितग्यास उत्सर्जनमा सबैभन्दा कम भूमिका हुँदाहुँदै पनि जलवायु परिवर्तनबाट अत्यधिक प्रभावित हुने मुलुकमा नेपाल एक हो ।
हाम्रो बजेटरी सिस्टममा नआएका र बीचैमा अलमलिएका अन्य दातृ निकायबाट खर्च हुने रकमलाई पनि हामीले प्रभावकारी ढङ्गबाट परिचालित गरेको छौँ । जस्तो विश्व खाद्य कार्यक्रम ९डब्लुएफपी० को करिब १०० मिलियन अमेरिकी डलरको कार्यक्रम कालीकोट, मुगु र जुम्लामा शुरु ग¥र्यौं
ती केही अलमलिएर बसेका थिए । दोलखा, सल्यान र अछाममा ‘इकोसिस्टम बेस एडप्टेशन’ को काम सञ्चालन गर्नेगरी करिब ५५ करोडको काम हामीले सञ्चालन गरेका छौँ । त्यसैगरी नेपाल जलवायु परिवर्तन सहायता कार्यक्रम ९एनसीसीएसपी० का कार्यक्रम केही जिल्लामा शुरु भएका छन् ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कोअप्रेशन कार्यान्वयनको विषय अहिले निकै चर्चामा छ, तपाईंको टिप्पणी के छ ?